Homo Machina: otu a ka Fritz Kahn si hụ ahụ mmadụ | Gam akporosis
Homo Machina, egwuregwu 2D nke ọrụ ọhụụ nke Fritz Kahn banyere otu ahụ mmadụ si arụ ọrụ
Home Machina nwere ike ịbụ ihe animated usoro ke mbubreyo 80s "Nke a bụ ndụ". Egwuregwu egwuregwu dị egwu maka mkpanaka gị nke bụ nnwere onwe nnabata nke ọrụ Fritz Kahn, onye dọkịta German nke chere ahụ mmadụ dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na 20s.
Ọrụ ya emeela ka ọtụtụ ọgbọ na ndị na-ese ihe nwee ume n'ihi ụzọ ọhụụ ya si aghọta usoro dị mgbagwoju anya nke ahụ anyị ma nwee ike ịnọchite anya ya site na atụ ya dị egwu. Anyị na egwuregwu na-aga maka afọ niile na anyị nwere ya na Spanish maka anyị kacha ụtọ.
1 Ọhụụ Fritz Kahn
2 Na-agba ugbu a ọ bụ n'efu
3 Ọ bụ ihe ịtụnanya
Ọhụụ Fritz Kahn
Ọ bụrụ na anyị kwuru maka usoro ihe nkiri ahụ bụ Así es la vida, ọ bụ n'ihi na o kwere ka ọgbọ dị iche iche hụ ụzọ otu ahụ mmadụ si arụ ọrụ. Na mpụga nke nkọwa ndị ahụ site na ahụ mmadụ ma ọ bụ akwụkwọ okike, ọ bụ usoro nke nyere anyị ohere ịmatakwu banyere ahụ anyị nke kachasị na-abaghị uru ma n'otu oge ahụ na-atụrụ ndụ.
Otu ihe a ka egwuregwu a na - akpọ Homo Machina na na ọ ga - akuziri gị kedu ka sistem okuku ume si arụ ọrụ ma ọ bụ mechekwa nke ya nke ohuru mgbe emeghere anya nkuchi. Anyị na-eche nnwere onwe nnwere onwe nke ọrụ nke Fritz Kahn na nke ahụ n'uche anyị ka emere n'ụzọ pụrụ iche.
Ọ bụ nnochi nke nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na 20s nke umu mmadu ndi mmadu na-aru agha bu ndi na-aru oru iji hu na ha zuru oke nke oru di nkpa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-enwe ike ịgabiga ọtụtụ akụkụ dị mkpa nke ahụ anyị na akụkọ na-agba anyị ume ịmara ya na nke nwere nnukwu oge ya na mkparịta ụka ya.
Na-agba ugbu a ọ bụ n'efu
Tupu ịga n’ihu ịza ajụjụ ntakịrị, egbula oge ijide Homo Machina, ebe ọ bụ na anyị na-eche ihu a egwuregwu kachasị elu nke nwere of 3,49. Ugbu a ọ bụ n'efu ma ọ bụ ohere kachasị mma iji nweta egwuregwu maka ezinụlọ dum yana nke ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ụmụaka na ụlọ.
Anyị na-ekwu ya n'ihi na ọ nwekwara usoro egwuregwu ya ma anyị ga-enwe ya mezie ikuku ikuku ma ọ bụ jiri mmiri jet iji hichaa oghere imi. Nke ahụ bụ ikwu, sayensị dị ọcha na egwuregwu dum maka igwegharị anyị nke nwere ike ịmasị mmasị; n'ezie anyị na-ekere òkè na ndepụta a sara mbara maka egwuregwu maka soro ndị ị hụrụ n'anya nwee obi ụtọ n'ịntanetị.
En ngụkọta bụ 30 etoju tọghatara na mgbagwoju anya na dị iche iche na-arụzi ụgbọala na na ga-ewe gị site na a ụwa mejupụtara nke irighiri akwara, arịa ọbara na valves. Ga-enwe ike ịmara etu ahụ anyị si arụ ọrụ mgbe anyị na-ege egwu ma ọ bụ ọbụlagodi mgbe anyị na-ata tost.
Ọ bụ ihe ịtụnanya
Co-mepụtara ARTE, European network dijitalụ telivishọn dijitalụ, Homo Machina bụ otu n'ime ihe kachasị mma anyị hụtụrụla n'oge na-adịbeghị anya dị ka uru mmụta na ekwentị anyị. Anyị ga-achọ inwe ọtụtụ egwuregwu ka ha wee mesie agụmakwụkwọ ike ma jee ozi iji gbaa ndị na-eto eto ume ịmụ banyere egwu, sayensị, nka, akwụkwọ… Olileanya na ọtụtụ na-ewere ya dịka ọmụmaatụ.
El ọhụụ Fritz Kahn laghachiri anyị na egwuregwu magburu onwe ya n'akụkụ ya niile na nke ị ga-anụrịrị ụtọ ihe atụ ya, mmegharị ahụ na ahụ ahụ enigmatic nke bụ ntọala nke ndụ anyị. A hapụrụ anyị na igwe ọrụ ya na mkparịta ụka ndị ahụ na-akpọ anyị oku ka anyị zute ndị ọrụ na-ahụ ahụ anyị. Egwuregwu kachasị mma.
Homo Machina ị nwere ya ugbu a n'efu maka ụbọchị ole na ole iji mara ahụ gị nke ọma ma nwee ngwa ọrụ agụmakwụkwọ dị ukwuu na ekwentị mkpanaaka gị. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka, nke a bụ oge kachasị mma iji gị na ha ga-eji oge ụfọdụ iji gbalịa ịmechaa ọkwa 30 nke Homo Machina ọnụ. Dị mkpa na site ebe a anyị na-akwado ya n'ihu ọha.
Ihe na-enye obi ụtọ bụ okwu kachasị mma igosipụta ihe egwuregwu a sitere na ọhụụ Fritz Kahn.
Bestzọ kachasị mma iji zie ihe
Ngwá ọrụ nke mgbagwoju anya
Mkparịta ụka dị na Spanish na-akpọ gị òkù ịmatakwu
Developer: Ahụmahụ ARTE
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Homo Machina, egwuregwu 2D nke ọrụ ọhụụ nke Fritz Kahn banyere otu ahụ mmadụ si arụ ọrụ
Patent ekpughe iPhone na interface maka mmiri n'okpuru osimiri ojiji